Shirka Beelaha Mudullood oo furmay Muqdisho iyo Madaxdii hore ee dalka oo ka qeyb galaya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Shirka Beelaha Mudullood oo furmay Muqdisho iyo Madaxdii hore ee dalka oo ka qeyb galaya
Magaalada Muqdisho gaar ahaan Xarunta Mowlaca Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur ayaa Maanta oo Isniin ah ka furmay Shirka wadatashiga ah ee Beesha Mudullood, kaas oo dhowr jeer dib u dhac uu ku yimid.
Shirkaas oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo Arrimo kale oo ku aadan aayaha Beesha Mudullood.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxweyneyaashii hore ee dalka sida Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sh Axmed iyo Cali Mahdi Maxamed, Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi, Xildhibaano ka tirsan DFS, siyaasiin, waxaa kaloo ka qeyb galaya in ka badan 1000 qof oo lagu Casuumay shirkaas.
Sidoo kale waxaa shirka ka qeyb galaya Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo lagu Casuumay, waxaana shirkaas laga soo saari doonaa War-murtiyeed ka kooban dhowr qodob.
Duqa Muqdisho oo Khudbad ka jeediyay Shirka Beesha Mudullood Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa Khubad ka jeediyay Shirka wadatashiga ah ee Beesha Muddulood uga socda Magaalada Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu kasoo qey galo Shirweynaha Beesha Mudullood, isagoona u mahadceliyay dhamaan dadkii kasoo shaqeyay Gogosha Beesha.
Waxaa uu sheegay Cumar Finish in Shirka Maanta furmay uu yahay fursad muhiim oo la helay, isla markaana ay tahay in la helo wax ay wada dhowraan siyaasiga xilka haya iyo midka xilka ka dagay oo ay beesha Mudullood leedahay.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyay in shirka markii uu soo dhamaado ay kasoo bixi doonaan Go’aano muhiim u ah shacaka Soomaaliyeed.
“Waa in ay jirtaa wax ay wada dhowraan siyaasiga xilka haya iyo midka xilka ka dagay oo ay beeshu leedahay, Umad waxa ay ka horumartaa talo mideysan iyo mabaa’dii, waxaan u baahanahay masaaliix joogto ah oo aan marnaba raacin is bedelka siyaasadeed ee dalka” ayuu yiri Cumar Maxamuud Finish.
Dhanka kale Wasiir Islow oo fariin u diray Madaxweyne Farmaajo Siihayaha Wasiirka Wasaaradda amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa Maanta ka qeyb galay Shirka Beesha Mudullood uga socda Xarunta Mowlaca Macalin Nuur ee Magaalada Muqdisho.
Wasiir Islow ayaa waxaa marka hore sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo qeyb galo Shirka Beesha Mudullood oo uu sheegay inuu yahay mid wadatashi ah oo lagu sixi doono waxyaabaha qaldan ee jira.
Wasiirka Amniga ayaa waxaa uu ka hadlay Arrimaha Doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo 2020/2021, isagoo sheegay in Doorashada dalka ay muhiim tahay inay ku dhacdo waqtigii loogu tala-galay, wuxuuna xusay in Doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay aan waqti lagu karin, wuxuuna tusaale u soo qaatay Doorashadii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Isaga oo sii hadlaayay Ducaale ayuu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu wadaddii Madaxdii ka horeysay, isla markaana Doorashada dalka lagu qabto waqtigii loogu tala-galay.
“Doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigeeda, maalinna laguma darsan karo, Madaxweyne Sheekh Shariif doorashada waqtigeeda ku qabtay, Madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo waa inuu raaca wadaddii Madaxdii ka horeysay” ayuu yiri Wasiir Islow.
Ugu dambeyn Siihayaha Wasiirka ayaa waxaa uu u mahadceliyay dhamaan Madaxda iyo qeybaha kala duwan ee ka qeyb galay Shirka Beesha Mudulloodu socda, wuxuuna u mahadceliyay dadkii kasoo shaqeeyay qabsoomida shirkaasi.
Sharrif sh axmed
“Walaalkeey Salaad Cali Jeelle wuxuu yiri doorasho qof iyo cod ayan rabnaa lakin aniga waxan leeyahay Doorashada la qabanayo xitaa Farmaajo ma oga nooca ay tahay”
“Marmar ayan isdhahaa Shariifow dabaal miyaa tahay horta. Sidee lagaaga dhaadhacsiin karaa Doorasho qof iyo cad ayaa dhaceeyso Agoosto kahor”
“Bahashaan waa leesku dhiibaa waa qori tuur. Hadaan aniga iyo Siyaad Barre iyo Cabdi Qaasim sii heysan laheen kursiga. Ka waran Xasan Sheekh iyo Farmaajo sacadaan madaxweyne ma noqon lahaayeen. Waa maya”
“Saxibkeeyoow Kursiga waa macaan yahay anagaa soo aragnay lakin asoo macaan ah ayaan ka dagnay. Adna walaalow nala tartan”
“Dhanka kale Muddulood waa inay ka garaabaan dhibaatada kale ee walaalahood ka tabanayaan. Waa inay shir kale isugu keenaan oo laga garaabo dhibaato kasto oo ku dhacday qof walbo oo Somaliyed”
Waa qeyb kamid ah qudbadii madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo aan idin soo koobay.
Shirka Beelaha Mudullood oo furmay Muqdisho iyo Madaxdii hore ee dalka oo ka qeyb galaya was last modified: August 3rd, 2020 by Admin
Dowladda Iyo Culimadda Muqdisho Oo Markale Kulan Yeeshay
Booliska Somaliland oo la wareegay Xarunta Universaltv ee Hargeysa
DAB KHASHAARO GEYSTEY AYAA KA KACAY SUUQ KU YAALA XAAFADA CUNAY EE MAGAALADA BAYDHABO